Sawirro: Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey duleedka Dhuusamareeb + Ujeedka - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Sawirro: Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey duleedka Dhuusamareeb + Ujeedka
Sawirro: Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey duleedka Dhuusamareeb + Ujeedka
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan qeybta 21-aad ee ciidanka Xoogga la geeyey duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inay haatan fariisimo cusub ka sameysteen deegaanka Ceeldheere oo hoos-yimaada magaaladaasi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamadan loogu talagalay inay sugaan amniga waddada xariirisa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel oo ay inta badan weeraro gaadmo ah ka fuliyaan xoogaga Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Galgaduud.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo kormeer ugu tegay ciidamadaas ayaa kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo igmaday ee ah sugida amniga.
Dhankiisa xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta Galmudug Gaashaanle Sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse oo khudbad u jeediyey ciidamada ayaa kula dardaarmay inay muujiyaan feejignaan ku aadan weerarada Al-Shabaab.
Keyse ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in tallaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doono askarigii sameeyo amar diido ama ku xad-gudbo dadka shacabka ah.
“Cudurka ugu daran ee jiritaanka ciidan waa amardiida ciidanka ka dhex jirta, waxa aad u dhisan tihiin hab ciidan oo waxaa la idinka keennay gobollo kala duwan, taliye ayaad leediyihiin ilaa taliye unug waana sharci diidanka ku dhisan yahay, Askarigii ka baxa xeendaabkaas ee amar-diido sameeyo ama xadgduba waaala ciqaabaa” ayuu yiri Keyse.
Deegaanada Galmudug ayaa waxaa si xoogan uga socdo howl-gallo ballaaran, kuwaas oo xoogooda haatan laga dareemayo koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Si kastaba dhaq-dhaqaaqa cusub ee haatan ka billowday duleedka Dhuusamareeb ayaa kusoo aadaya, xilli magaaladaas ay dhowaan ka dhacdo doorashada Golaha Aqalka Sare.